Somalia: Waa maxay wadaniyad? Somger
Si aan isula fahanno macnaha wadaniyadda waxaa lagama maarmaan ah inaan kolka hore wadajir isula eegno macnaha muwaadin.
Colaadaha sokeeye ee dalkeena ragaadiyay waxay meesha ka saareen waxbarashadii, arrintanina waxay waayeel ka noqotay caruurteenu inayan ogaal iyo aqoon toonna ka helin ahaanshiyaheena dadeed, iyo lahaanshiyaheena daleed. Waxaana dadka iyo dalka dhexdiisa ku xoogeystay mooryaan, qowleysato, iyo qabqableyaal hiddi-waalideystayaal ah oo feker iyo fal walboo ay sameynayaan ka dhex-eegta danahooda gaarka ah, arrintanina waxay cawartay fahamka wadaniyadeed ee muwaadin walboo 91-kii ka dhalasho dameeyay.
Wadaniyaddu maahan markii aan kursiga ku fariisto ayan dadka u adeegayaa, ee waa dhiig u-shibidda dadka iyo dalka inta itaalka iyo taladu ay kugu jirto. Wadanigu waa qof sumcad iyo magac ku dhex-leh bulshadiisa, xataa hadii uu dhinto waa mid aragtiyihiisa iyo wanaaggiisu ay ku dhex-nool yihiin quluubta bulshadiisa.
Muuqaalo qurux badan: Nabaddu Waa Quwad - Nabaddu Waa Quruxda Nolosha